Chrome 86 rutere na mgbanwe URL, ndozi ndozi na ndị ọzọ | Site na Linux
Febọchị ole na ole gara aga wepụtara ọhụụ ọhụrụ nke ihe nchọgharị weebụ na-ewu ewu «Chrome 86» n'ime ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ gụnyere, karịsịa n'ihe banyere nchekwa, ma maka Apple na gam akporo ngwaọrụ.
Na mgbakwunye na mmezi ime ụlọ mbụ, Google Chrome 86 nwere atụmatụ na-adọrọ adọrọ nke na-enyere onye ọrụ aka ịgbanwe ngwa ngwa okwuntughe na-echebe gị site na weebụsaịtị ndị na-emebi ihe CPU gị (na batrị batrị) na sekọnd ewepụghị.
1 Main atụmatụ ọhụrụ nke Chrome 86
1.1 Etu esi etinye Google Chrome 86 na Linux?
Main atụmatụ ọhụrụ nke Chrome 86
Versiondị ihe nchọgharị ọhụrụ a na-abịa na mgbanwe dị iche iche, mana nke pụtara ìhè anyị nwere ike ịchọta oru ohuru nke na-eme ihe n'oge ahụ Chrome na-achọpụta na imebi okwuntughe.
E wezụga nke ahụ ọhụrụ paswọọdụ manager ga-enyere gị dochie leaked paswọọdụ maka nke ohuru. Chrome ga-eme nke a site na iduzi gị peeji nke paswọọdụ maka ajụjụ webụsaịtị. N'ihi nke ahụ, ịtọgharị paswọọdụ bụ usoro dị mfe ma dịkwa mfe.
Chrome 86 ga-agụnye ịdọ aka ná ntị agwakọtara ma na desktọọpụ na nsụgharị gam akporo iji kpachara anya ma dọọ ndị ọrụ aka ná ntị tupu ha ebute ụdị adịghị nchebe nke agbakwunyere na ibe HTTPS. Ihe nchọgharị ahụ ga-egbochi ma ọ bụ dọọ aka ná ntị banyere ụfọdụ nbudata na-adịghị ize ndụ nke peeji ndị echedoro.
Ọzọ nke mgbanwe na-apụta ìhè bụ na bachie caching e emejuputa atumatu, mgbe na-agagharị na mbụ anya peeji nke ugbu a na saịtị. A na-eme ka oghere ahụ pụta site na ịnweta ụzọ nhazi usoro ndị a: chrome: // flags / # back-forward-cache.
Ọzọkwa, ụdị ọhụụ a na - eme ka otu n’ime mkpesa nke ndị ọrụ natara na nke ahụ dị mma na Chrome 86 emewo ka njikarịcha nke njiri nke CPU ego si na windo iru eru.
Chrome na-enyocha ma ọ bụrụ na windo windo ndị ọzọ mechibidoro windo nchọgharị ahụ na-egbochi pikselụ ịdọpụta ya na mpaghara ndị ọzọ. Enyere njikarịcha a maka obere ọnụọgụ ndị ọrụ na Chrome 84 na 85, ma na-arụ ọrụ ugbu a ebe niile. N'iji ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga, anyị kwukwara banyere enweghị nkwekọ na sistemụ arụmọrụ nke na-eme ka peeji ndị ọcha pụta.
Na mgbakwunye, na mma mkpachị akụ maka ndabere taabụ. Mpekele ndị a enweghị ike iri ihe karịrị 1% nke ihe onwunwe CPU ma enweghị ike rụọ ọrụ karịa otu ugboro kwa nkeji. Mgbe nkeji ise n'azụ, taabụ na-agbaze, belụsọ maka taabụ ndị na-akpọ ma ọ bụ na-edekọ ọdịnaya multimedia.
The HTTP User-Agent nkụnye eji isi mee unification ọrụ maliteghachiri. Na ọhụrụ version, na A na-akwado nkwado maka Usoro Ndị Ọrụ Ndị Ọrụ Onye Ọrụ maka ndị ọrụ niile, nke a na-emepe ka onye nnọchi anya Onye Ọrụ.
Usoro ohuru a gụnyere ntinye nhọrọ nke data na ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ (mbipute, ikpo okwu, wdg) naanị mgbe arịrịọ sitere na ihe nkesa na-enye ndị ọrụ ohere ịnye ndị nwe saịtị ozi dị otú ahụ.
Mgbe ị na-eji Ntuziaka Ndị Ahịa Onye Ọrụ, a naghị ebunye njirimara ahụ na ndabara na-enweghị arịrịọ doro anya, nke na-eme ka njirimara njirimara na-agaghị ekwe omume (na ndabara, ọ bụ naanị aha ihe nchọgharị ahụ gosipụtara).
Na mgbakwunye na ihe ọhụrụ na ndozi ahụhụ, E kpochapụwo ihe mgbochi 35 na ụdị ọhụrụ ahụ. Otu n'ime ha bụ nsogbu (CVE-2020-15967, ịnweta ebe nchekwa ahụ wepụtara na koodu iji soro Google Payments) gosipụtara dị oke egwu, ya bụ, ọ na-enye ohere ịgafe ọkwa niile nke nchedo ihe nchọgharị ma mepụta koodu na sistemụ na gburugburu ebe sandbox.
N'ikpeazụ dịka akụkụ nke mmemme Ego Ego nke Onyinye Ego maka ụdị dị ugbu a, Google kwụọla ụgwọ ọrụ 27 maka ngụkọta nke $ 71,500 (otu $ 15,000, atọ $ 7,500, ise $ 5000, abụọ $ 3000, otu $ 200, na $ 500 abụọ).
Etu esi etinye Google Chrome 86 na Linux?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Chrome 86 rutere na mgbanwe URL, ndozi nchedo na ndị ọzọ